Archive du 20200116
Fandaminana an’Antananarivo Nohetsehina ny polisy, zandary ary miaramila
Samy manao izay saim-pantany ny mpampiasa lalana ary tsy misy fandraisana andraikitra hatramin`izay. Tsy lazaina intsony ny afitsok`ireo mpitondra moto.
Tsaho, fanalam-baraka, fampiadiana Namaly bontana i Rina Randriamasinoro
Naely tamin’ny tambajotran-tserasera omaly ny resaka nampiroaroa saina nentina niresahana ny kandida ben’ny tanàna teto Antananarivo natolotry ny TIM Rina Randriamasinoro.
Didim-pitsarana momba ny fifidianana Mbola maro no havoakan’ny filankevi-panjakana
Ho an’ireo kaominina izay nodidian’ny fitsarana fa haverina ny fifidianana dia tsy miova ny fitantanana ao aminy aloha, hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana,
Ratsirahonana sy ny AVI Tsy mipoipoitra fahatany fa ao raha…
Tsy tongatonga foana fa mamofompofona toe-draharaha lehibe eto amin’ny firenena rehefa Atoa Norbert Lala Ratsirahonana no mipoitra tampoka sy re indray eo amin’ny tontolo politika.
Fampandrosoana isam-paritra Miala any indray ny “Zones d’émergence”
Omaly no neken’ny Filankevitry ny Minisitra ny fifanarahana teo amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara sy ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika,
Be loatra ny mpamosavy malemy
Tsy takona afenina intsony fa mikorontana ny firenena. Tsy mahavaha olana ny fitondram-panjakana.
Fampianarana ambony « Mahamenatra fa eto Madagasikara irery no misy grevy lava »
Amin’ny maha fetra farany nanomezan’ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo ny governemanta omaly 15 janoary 2020
Fanamboarana fotodrafitrasa eto Madagasikara Mahatratra 500 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola
Fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa maro no efa nataon’i Madagasikara miaraka amin’ireo mpamatsy vola mahazatra.
Fahitalavitra nomerika Efa tena mahaliana ny Malagasy
Mihamaro ireo tolotra misy mba hisitraka fahitalavitra nomerika ny eto Madagasikara.
Toekarena sy fihariana Ambany ny tahan’ny fampindramam-bola any ambanivohitra
29% monja ny Malagasy tafiditra amin’ny rafitra mpampindrambola tamin’ny taona 2016 ary tanjona ny hampiakatra izany ho 45% amin’ny taona 2022.
Vidim-piainana midangana sy kolikoly Miha mafy ny hetsika an-dalambe any Liban
Efa hiditra amin’ny faha 90 andro izao no nitrangana fidinana an-dalambe tany Liban, fa niavaka kely omaly satria dia teo anoloan'ny banky foibe libanais no nitrangan'ny sakoroka.
Fandraisana mpianatra ho zandary Azo fantarina amin’ny SMS ny voka-panadinana
Hivoaka tsy ho ela ny vokatra tamin’ny fanadinana handraisana mpianatra ho zandary notanterahina ny 23 novambra lasa teo manerana ny Nosy.
Famatsiana rano fisotro madio Mitady vahaolana hatrany ny JIRAMA
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ireo tetikasa hamahana ny olan’ny famatsian-drano manerana ny Nosy ny
Asam-panjakana Mpiasa matoatoa 23 437 tsy maintsy hofoanana
Nandinika manokana momba ny mpiasam-panjakana ny filankevitry ny minisitra notanterahana omaly.
AMBATONDRAZAKA Karohana fatratra ireo jiolahy mpanolana
Ankoatra ny fanadihadiana lalina tanterahin'ireo mpitandro filaminana, efa midina ifotony am-panamborana ireo jiolahy nahavanon-doza izay nanolana ilay renim-pianakaviana tao Ambatondrazaka izy ireo.
Afera maizina sy trafikan’olombelona Mandray 1,9 tapitrisa Ar ireo Malagasy hivaro-tena any Sri Lanka
Sinoa roa sy teratany Malagasy vehivavy iray no voasambotry ny polisy ny zoma 10 janoary teo teny Behoririka sy Analakely tamin’ny fikasana hivarotena any Sri Lanka.
PRE-QUALIFICATION AFROBASKET 2021 Efa miomana fatratra ny ekipam-pirenena Malagasy
Eo am-piomanana tanteraka hiatrika ny PRE-QUALIFICATION –n’ny AFROBASKET 2021 any Kigali ny ekipam-pirenena Malagasy amin'izao fotoana,